ड्यान्यूब साइकल मार्गको सबैभन्दा सुन्दर भाग कहाँ छ? > साइकल द्वारा
↓ मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
अब डेन्यूब साइकल पथ
चरण5मेल्क - क्रेम्स
वाचाउ के हो?
वाचाउमा डेन्यूब साइकल पथमा वसन्त
वाचाउमा खुबानीको फूल
पछाडिको भवन भग्नावशेष
डेन्युब साइकल मार्ग के हो?
डेन्यूब युरोपको दोस्रो सबैभन्दा लामो नदी हो। यो जर्मनीमा उठ्छ र कालो सागरमा बग्छ।
ड्यानुबको साथमा एउटा साइकल मार्ग छ, ड्यान्यूब साइकल मार्ग।
जब हामी ड्यान्यूब साइकल मार्गको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी प्रायः पासाउ देखि भियना सम्मको सबैभन्दा धेरै यात्रा गरिएको मार्ग हो। ड्यानुबको साथमा यस चक्र मार्गको सबैभन्दा सुन्दर खण्ड वाचाउमा छ। Spitz देखि Weissenkirchen सम्मको खण्डलाई वाचाउको मुटु भनिन्छ।
पासाउ देखि भियना सम्मको यात्रा प्रायः7चरणहरूमा विभाजित हुन्छ, प्रति दिन औसत 50 किमी।
डेन्यूब साइकल पथ को सुन्दरता
ड्यान्यूब साइकल पथ तल साइकल चलाउनु अद्भुत छ।
यो विशेष गरी खुल्ला बग्ने नदीको छेउमा साइकल चलाउन राम्रो हुन्छ, उदाहरणका लागि ड्यान्युबको दक्षिण किनारमा रहेको वाचाउमा Aggsbach-Dorf देखि Bacharnsdorf सम्म, वा Au हुँदै Schönbühel बाट Aggsbach-Dorf सम्म।
7 दिन Passau Vienna मा
डेन्युब साइकल पथमा बाटोमा
एक Heuriger के हो?
सुरक्षित साइकल चलाउने (साइकल चालकहरू खतरनाक रूपमा बाँच्छन्)